Thaïlande : Nanolotra lelavola 60 000 Dolara ho an’i Madagasikara -
AccueilSosialyThaïlande : Nanolotra lelavola 60 000 Dolara ho an’i Madagasikara
Thaïlande : Nanolotra lelavola 60 000 Dolara ho an’i Madagasikara
29/11/2017 admintriatra Sosialy 0
Tonga nitsidika ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, teny amin’ny Lapam-panjakana Mahazoarivo ihany koa ny avy amin’i Thaïlande tamin’ny alalan’i Kriwat Phamorabutra, solontena sy mpisolo toerana ny kaonsily jeneralin’i Thaïlande, eto Madagasikara.
Tamin’izany indrindra no nahafahan’ity diplaomaty ity nanolotra tamin’ny fomba ôfisialy ny fanomezana ho an’i Madagasikara avy amin’ny Fanjakana Thaïlande. Fanomezana sy fanampiana ara-bola mitentina manodidina ny 60 000 Dolara izany, izay noho ny fangatahan’ny governemanta malagasy ho amin’ny famatsiana vary. Izany no natao noho ny tsy fahampiana ara-bary izay sedrain’ny firenena malagasy amin’izao fotoana izao.
Tetsy andaniny, dia nitondra ny teny fisaorana ho an’ny governemanta Thaïlande kosa ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier amin’ny fanampian’i Thaïlande an’i Madagasikara eo amin’ireo sehatra maro.
Ankoatra izay, dia nampahafantarin’i Kriwat Phamorabutra ny praiminisitra ihany koa ny fanoloran’izy ireo fanomezana fanafody sy fitaovam-pitsaboana ho an’ny hôpitaly Thaï-Mada any Ilakaka. Voalaza fa ny Kaonsily jeneralin’i Thaïlande miaraka amin’ny fikambanana Thaïlande eto Madagasikara no nanangana io hopitaly io. Nahafahana nitsabo sy nanavotra ain’olona manodidina ny 800 tany amin’iny faritra Atsimon’i Madagasikara iny io tetikasa io.
Nambaran’ity diplaomaty vahiny ity hatrany , fa efa eto Madagasikara sahady ny delegasiona Thaïlande hanatanteraka tetikasa ho an’ny fampandrosoana ara-tsosialy maharitra.
Ho setrin’izany rehetra izany, dia notoloran’ny praiminisitra « Certificat de remise de dons » kosa ity kaonsily jeneraly mpisolo toerana ity ho an’ny governemanta Thaïlande.